FAQs - Jiangsu Jinluo New Material Technology Co., Ltd.
Haa, waxaan u baahanahay dhammaan amarrada caalamiga ah si aan u yeelanno tirada dalabka ugu yar ee socdaMOQ waa 1000 mitir.
Shaybaarada, wakhtiga rasaastu waa ilaa 7 maalmood.Wax soo saarka tirada badan, wakhtiga rasaasta waxaa lagu go'aamiyaa iyadoo loo eegayo tirada iyo qeexidaee alaabta gaarka ah.Waqtiyada hogaanka ayaa wax ku ool noqda markaan helnay deebaajigaaga,Dhammaan kiisaska waxaan isku dayi doonaa inaan daboolno baahiyahaaga.Inta badan kiisaska waan awoodnaa inaan sidaas sameyno.
30% dhigaal hore, 70% baaqila bixiyay ka hor inta aan la rarin.
Waxaan dammaanad qaadaynaa agabkayaga iyo shaqadayada.Ballanqaadkayadu waa inaan kaa yeelno inaad ku qanacdo badeecadeena, muddada dammaanaddayaduna waa hal sano.
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaalnaa baakadaha dhoofinta tayada sare leh.Baakadaha gaarka ah iyo shuruudaha baakadaha aan caadiga ahayn waxay keeni karaan kharashyo dheeraad ah.